သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲများသည် သြဇီဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှု ပြင်းလေ့ရှိပါသည်.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဗဟိဘဏ်များက တင်းကြပ်သည့်ငွေကြေးမူဝါဒကို စတင်ကျင့်သုံးရန်ပြင်ဆင်နေကြစဉ်မှာပင် သြစတေးလျှဘဏ်တိုးနှုန်းသည် ၁. ၅%ဖြစ်သည့် အနိမ့်ပိုင်းမှာသာ ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါသည်.
သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲဖြစ်သူကလည်း "အတိုးနှန်း တက်ပြီးနောက် တဖြန် ပြန်ကျ"မှုမျိး "ဖြစ်လာနိင်ဖွယ်ရှိ"သည်ဟု အရိပ်အမွက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ်သည် အတိုးနှန်းတင်မည့်ကိစ္စအား အလောတကြီးဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပေ. ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲဖြစ်သူ Loweအဆိုအရ နိုင်ငံ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတည်ငြိမ်ခိုင်မာနေခြင်းကြောင့် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စအား လောကြီးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်.
အကယ်၍ အောက်တိုဘာ ၃ရက်နေ့ပြုလုပ်မည့် သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စအား အသေးစိတ်သေသေချာချာပြောသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါက AUDဒေါ်လာတန်ဖိုးသည် အခြားငွေကြေးများနှင့်ယှဉ်ပါက တန်ဖိုးကျဆင်း သွားနိုင်ပါသည်. အထူးသဖြင့် EUR ၊CAD နှင့် USDတို့နှင့်ယှဉ်ရာတွင် ပိုမိုသိသာနိုင်ပါသည်. ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စကို လေသံမာ hawkishပြောသွားခဲ့ပါက AUD၀ယ်လိုအားများပြီး တန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိင်ပါသည်.